Nhau - Musiyano Pakati PeLithium Drill 12V Uye 16.8V
Magetsi madhiraivha anowanzo shandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Kana tichida kuboora maburi kana kuisa masikirini pamba, tinofanirwa kushandisa zvidzitiro zvemagetsi. Iko kune zvakare misiyano pakati pemagetsi ekudhiraivha. Iwo akajairika ndiwo gumi nemaviri volts uye 16.8 volts. Zvino ndoupi mutsauko pakati pezviviri?
Ndeupi mutsauko uripakati pe12V ne16.8V magetsi ekudhira?
1.Musiyano mukuru pakati pemaoko maviri emagetsi ekuchovha iwo magetsi, nekuti imwe voltage i12 volts, imwe yacho 16.8 volts, inogona kuve yakatanhamara, uye kuchave nekuratidzwa kwakajeka papakeji.
2.Kumhanya kwakasiyana. Kana uchimhanya pasi pemakoto akasiyana, zvinokonzeresa kumhanya kwakasiyana. Mukuenzanisa, 16.8 volt yemagetsi chibhorani ichave iine rakakura rakakura kumhanya.
3.Iyo bhatiri kugona kwakasiyana. Nekuda kwema voltages akasiyana, saka unofanirwa kusarudza mota dzakasiyana uye kugadzirisa akasiyana emagetsi emagetsi. Iyo yakakwira iyo voltage, iyo yakakwira iyo yemagetsi kugona.
Kupatsanura kweMagetsi Drills
1.Divided zvinoenderana nechinangwa, pane screws kana yekuzvipa-yakapihwa screws, uye kusarudzwa kwemagetsi mabhureki kwakasiyanawo, mamwe anokodzera kuchera simbi zvinhu, uye mamwe akakodzera huni zvinhu.
2. Yakakamurwa zvinoenderana nemhepo yebhatiri, iyo inowanzo shandiswa ndeye 12 volts, pane 16.8 volts, uye 21 volts.
3. Yakakamurwa maererano nebheteri kupatsanura, imwe iri lithiamu bhatiri, uye imwe iri nickel-chromium bhatiri. Iyo yekutanga inozivikanwa zvakanyanya nekuti inotakurika uye ine kurasikirwa kushoma, asi sarudza nickel-chromium bhatiri mutengo wemagetsi ruoko chibooreso unenge uchidhura.